आमालाई पहिरोले लग्यो, किरिया बसे छोरीहरू – PathivaraOnline
Home > समाचार > आमालाई पहिरोले लग्यो, किरिया बसे छोरीहरू
आमालाई पहिरोले लग्यो, किरिया बसे छोरीहरू
admin July 29, 2020 समाचार	0
स्याङ्जा : स्याङ्ग्जा जिल्लाकाे गल्याङ् नगरपालिका–१० सिमलसौंराका २५ वर्षीया देवी राना पहिरोमा परी ज्यान गुमाएकि आमाको किरिया बसिरहेकी छिन्। छोरीले पनि बाबु आमाको किरिया गर्न मिल्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दे १२ दिन किरिया बस्ने उनले बताइन्। तीन छोरी मध्ये उनी माइली हुन। जेठी छोरी मालती विवाहित र कान्छी छोरी नारायणी घाइते भएकाले माइली छोरी देवी छोरालेझैें गरी किरिया बसेकी छिन्।
अरु छोरीहरू पनि शुद्ध रही आमाको अन्तिम संस्कारमा जुटेका छन् । साउन ७ बुधवारको पहिरामा परि आमा माया रानाको मृ,त्यु भयो भने आमासँगै सुतेकी नारायणी घा,इते भइन् । घाइते उनलाई उपचारका लागि पोखरा पठाइएकोे थियो। आमाको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन उनलाई बिहीवार स्याङजा ल्याइएको हो। हाल उनी वालिङ स्थित आफन्तकहाँ बसेर उपचाररत छन् । उनले घरमा पुगेर किरिया बस्न सकिनन्। उनको खुट्टामा चोट छ।
मृ,तक ५२ वर्षीया मायाको बिहीवार पवित्र तिर्थस्थल रामनदीधाम राम्दीमा हिन्दु संस्कार अनुसार अ,न्त्येष्टि गरिएको छ। शुक्रबारदेखि धार्मिक विधि अनुसार काज किरिया सुरु गरेको छिमेकी फर्सुराम खनालले जानकारी दिए। मृ,तक मायाका पति गुमबहादुरु राना भारतको सिलगुढीमा बस्छन्। भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका ५५ वर्षीय गुमबहादुर अर्काे घरजम गरी उतै बसेका हुन्। प,त्नीको निधन भएको खबरपछि घर फर्केका उनी उनी होम क्वारे,न्टाइनमा छन् ।
जेठी छोरी मालतीको विहे गल्याङमा भएको हो। पछि उनी तराई झरिन्। उनले माइली बहिनी देवीलाई पनि उतै राखेर पढाउँदै आएकी थिइन्। अहिले उनी स्नातक तहमा पढ्छिन्। ‘आमाले अनेक दुःख, समस्या झेल्दै हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनुभयो, पढाउनुभयो यसप्रति कृतज्ञ छु’ देवीले भन्छिन्– ‘आमाको सेवा भावप्रति म किरिया बसेकी हुँ, मेरा छोरा नै तिमी हौं’ आमाले सधैं यसो भन्नुहुन्थ्यो।’
गल्याङमा आमा र कान्छी बहिनी नारायणी बस्दैै आएका थिए। नारायणीले पनि प्लस टु सकेर वालिङमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु गरेकी छिन्। गत बुधबार करिब २५ मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले राना परिवारको घर, गोठ पुरेको छ। घर अगाडी बनाइएका शौचालय, धारा, आगँन झारेर करिब ६० मिटर तल पुर्याएको छ । स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट
बचाउ भन्ने चिच्चाहट सुनेर साथी बचाउन गए, न साथीलाई बचाए, न आफु नै! यसरी सकियो २ जनाकै जिन्दगी! हेर्नुस्
आइजीपी खनाल काण्डः के साँच्चै बर्खास्त गर्ने तयारी गर्दैछ सरकार?